ဂျွန်မေယာက တေလာဆွစ်ဖ်ရဲ့ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ချီးကျူး - Yangon Media Group
ဂျွန်မေယာက တေလာဆွစ်ဖ်ရဲ့ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ချီးကျူး
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၉
ကမ္ဘာကျော် ကန်းထရီးအဆို တော် တေလာဆွစ်ဖ်သည် ယခုအပတ်အတွင်း လော့စ်အိန်ဂျလိစ် မြို့ရှိ iHeartRadio Theater ၌ သူမ၏နောက်ဆုံးထွက်သီချင်းများ ဖြင့် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ယင်း ပွဲကို တေလာ၏ချစ်သူဟောင်း အဆိုတော်ဂျွန်မေယာက ချီးကျူးခဲ့ သည်ဟု CNN က ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂျွန်မေယာက ”ကျွန်တော် သူ့အောင်မြင်မှုသတင်းကို အမြဲ တွေးမိပါတယ်။ သူမရဲ့ ဒီနောက် ဆုံးထွက်တေးအယ်လ်ဘမ်ထဲက သီချင်းတွေက သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။ သူမက အလုပ်ကိုအောင် အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်တဲ့သူပါ။ သူ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိတယ်”ဟု CNN သို့ ပြောခဲ့သည်။
မေယာနှင့်ဆွဖ်တို့သည် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်က မေတ္တာရှိခဲ့ကြပြီး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင်လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် သီချင်းများ အတူဖန်တီးခဲ့ကြဖူးသလို လမ်းခွဲချိန်၌လည်း ဆွစ်ဖ်က “Dear John” ဟူသောသီချင်းရေးစပ်၍ လွမ်းဆွတ်မှုကိုပြခဲ့သလို “It made me feel terrible” ဟူသည့် အဆွေးသီချင်းကိုလည်း ရေးစပ် သီဆိုခဲ့ရာ လူကြိုက်များခဲ့သည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အချစ်ဇာတ်လမ်းကို သီချင်းရေးကာ ရောင်းစားသည်ဟု ဝေဖန်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် မေယာက ”ကျွန်တော်ဒါကို ဘယ်လိုမှမနေပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိခဲ့ကြတယ်။ ချစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကိုက ထိုက်တန်မှုရှိနေပါပြီ။ ဒီလမ်းခွဲမှုမှာ သူခံစားရတယ်ဆိုရင် သူသီချင်း ရေးမှာပါပဲ”ဟု ပြောခဲ့သည်။
ဂျက်ရှီရာနဲ့ ဒမ်လီဗာတို့ လက်ထပ်လိုက်ပြီ
သီရိမင်္ဂလာ ယာဉ်ရပ်နား စခန်းကို အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အအုံ အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် မသင့်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေး၊ ??
မှော်ဘီမြို့တွင် အင်အားရစ်ခ်ျတာစကေး ၄ ဒသမ ၆ အဆင့်ရှိ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်၊ ၄၈ ရက်အတွင်း မြန်မ??
ဝန်ကြီးချုပ် ညှိနှိုင်းပေးထားသည့်အတိုင်း အလုပ်ရှင်က မလိုက်နာဟုဆိုကာ Blue Moon အထည်ချုပ်စက်ရုံ လု